အပေါ်ပိုင်း homogenizer ပါရှိသော တရုတ် ဖုန်စုပ်စက်၊ZhiTong
အပေါ်ပိုင်း homogenizer|အလှကုန် ရောနှောစက်ဖြင့် လေဟာနယ်ကို တူညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်း emulsifier
1. Cosmetic Mixer စက်မပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း ရောစပ်ခြင်း- တစ်လမ်းသွား မွှေခြင်း၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း အမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်း၊ 0-63RPM။
2. စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ အရည်အသွေးသေချာစေရန် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို မူရင်းတင်သွင်းသည့်အမှတ်တံဆိပ်ပေးသွင်းသူ။
3. emulsifying လုပ်ငန်းစဉ်အရ၊ emulsifying ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို များစွာလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသော emulsifyin6 ၏အားသာချက်များကို အပြည့်အဝထင်ဟပ်စေသည်။
၄။Cosmetic Mixer စက်ပင်မအိုး- ပစ္စည်းဝင်ပေါက်၊ ဖုန်စုပ်ကိရိယာ၊ လေဟာနယ် အဆို့ရှင်၊ မှန်ကြည့်၊ လေစစ်၊ ရေမွှေးပျံ့စသည်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။
5. Cosmetic Mixer စက်PLC controller သည် စက်မော်နီတာ စက်လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူစေသည်၊
6. ဖုန်စုပ်ပစ္စည်းစုပ်ယူခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် အမှုန့်ပစ္စည်းများအတွက် ဖုန်မှုန့်များကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
7. ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း ရောစပ်ခြင်း- တစ်လမ်းသွား မွှေခြင်း၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း အမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်း၊ 0-63RPM;
8. စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ အရည်အသွေးသေချာစေရန် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို မူရင်းတင်သွင်းသည့်အမှတ်တံဆိပ်ပေးသွင်းသူ၊
9 .emulsifying လုပ်ငန်းစဉ်အရ၊ emulsifying ၏လုပ်ဆောင်မှုကို အလွန်အဆင်ပြေချောမွေ့စေပြီး ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးသော emulsifying ၏အားသာချက်များကို အပြည့်အဝထင်ဟပ်စေပါသည်။
10. Vacuum emulsifier ပင်မအိုး- ပစ္စည်းဝင်ပေါက်၊ ဖုန်စုပ်ကိရိယာ၊ လေဟာနယ် အဆို့ရှင်၊ မှန်ကြည့်၊ လေစစ်၊ ရေမွှေးဟောက်ပါ စသည်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။
11. အောက်ပါစနစ်များသည် လိုအပ်ချက်အရ ရွေးချယ်နိုင်သည်- Batching System၊ Discharge System၊ Cooling/Heating Temperature Control System၊ Vacuum System၊ Nitrogen Protection System၊ Condensation and Recovery System၊ PH Value On-line Measurement and Control System၊ CIP Cleaning System စသည်တို့ဖြစ်သည်။
12. Button Type Control Panel- အပူချိန်၊ အချိန်၊ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်၊ emulsification၊ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း ဆက်တင်၊ လေဟာနယ်နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းခြင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေပါသည်။
၁၃။Cosmetic Mixer စက်ညစ်ညမ်းစေသော ထုတ်ကုန်များသည် ပိုးမွှားဖြစ်ခြင်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
14. တစ်သားတည်းဖြစ်စေသော အောက်ခြေ- ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်း အမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်း 0-3600r/min၊ Simens မော်တာ၊ တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုနှင့် တာရှည် ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း၊ အောက်ခြေ အဆို့ရှင်အား ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ပင်မအိုးအား ထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုလည်း ကိုယ်တိုင် စွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်။
၁၅။Cosmetic Mixer စက်အလှကုန်စက်ရုံနှင့် ဆေးဝါးများတွင် အမျိုးမျိုးသော ငါးပိ၊ ခရင်မ်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန် သင့်လျော်သည်။
16 .အထူးသဖြင့် တည်ငြိမ်သော emulsion လိမ်းဆေးများ၊ နို့၊ ဂျယ်များ၊ ဗာလစံဆီများ၊ ဆေးရည်များ၊ လိမ်းဆေးများ၊ သွားတိုက်ဆေးများ စသည်တို့ကို ဓာတု၊ အလှကုန်၊ ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် အလွန်သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများပါ၀င်သော အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
17. .Homogenizing vacuum emulsifier mixer သည် frequency conversion timing homogenizer ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံး rotate speed သည် 4500 r/min ဖြစ်သည်။
18. tripl mixing သည် မတူညီသော နည်းပညာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည့် အမြန်နှုန်း ချိန်ညှိမှုအတွက် တင်သွင်းလာသော ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက်ကို လက်ခံပါသည်။
၁၉။Cosmetic Mixer စက်ရုတ်သိမ်းခြင်းစနစ်သည် ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ homogenizer၊ mixer နှင့် agitator အတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းရန် အဆင်ပြေသည်။
20 .ရောစပ်ခြင်း အမျိုးအစား နှစ်ထပ်ဦးတည်ချက် ရောစပ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို ရရှိစေရန် မြင့်မားသော shear homogenizer emulsifier
21. ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောရေနှင့်ဆီအဆင့် : လိုက်လျောညီထွေရှိသောကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ရန်အတွက် သီးခြားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
22. lifting စနစ်များတွင် သင်ရွေးချယ်ရန်အတွက် single-cylinder lifting နှင့် double-cylinder lifting ပါဝင်သည်။
23. ပင်မလေဟာနယ် homogenizer စက်ရှိ လျှပ်စစ်အပူပေးရန်အတွက် နှစ်ထပ် အပူချိန် probes နှင့် controllers များ၊
24. လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်အရ တိုင်ကီကိုယ်ထည်သည် လျှပ်စစ်အပူပေးမှုကို အပူပေးပြီး အအေးပေးနိုင်သည်။
25.Cosmetic Mixer Machine ပြီးပြည့်စုံသော အမှုန်အမွှားအရွယ်အစား2မိုက်ခရိုမီတာနှင့် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေခြင်း။
26. အပေါက်များနှင့် နံရံခြစ်ထားသော ပုံသေ impellers များ၏ Contra ရောစပ်စနစ်။
၂၇။Cosmetic Mixer စက်ဖောက်သည်၏ CIP စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်ရန် Spray ball တပ်ဆင်ထားသည်။
28. ဖုန်စုပ်စုပ်စက်၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် GMP စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
29. .SUS316L Wall scrapper mixer PTFE scraper ပုံသေပန်ကာ၊ အရောအနှောပြီးမြောက်ကြောင်းသေချာစေရန် Siemens မော်တာဒရိုက်၊ 0-65rpm ကွဲပြားသောအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်ရှိ 45degree ဓါးသွားများ။
30. အဆိုပါစက်သည် အလှကုန်စက်ရုံနှင့် ဆေးဝါးများတွင် ငါးပိ၊ ခရင်မ်ထုတ်ကုန် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ရန် သင့်လျော်သည်။
တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း- ဆေးဝါး emulsion၊ ဆီမွှေး၊ ခရင်မ်၊ မျက်နှာဖုံး၊ ခရင်မ်၊ တစ်ရှူးများကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ ဖျော်ရည်၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ယိုအစားအစာလုပ်ငန်း- ချောကလက်ခွံ၊ သစ်သီးပျော့ဖတ်၊ မုန်ညင်း၊ ကိတ်မုန့်၊ အသုပ်ဆော့စ်၊ အချိုရည်များ၊ သရက်သီးဖျော်ရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးပျော့ဖတ်၊ သကြားရည်၊ အစားအစာ ဆန်ပြုတ်၊ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့။ 8၊ nanomaterials- nano calcium carbonate၊ nano coatings၊ အမျိုးအစားအားလုံး နာနိုပစ္စည်းထည့်ပစ္စည်း စသည်တို့
1. ပါဝါထောက်ပံ့မှု- သုံးအဆင့် : 220v 380v .415v။50HZ 60HZ;
2. စွမ်းရည် : 100L မှ 5000L အထိ;
3. မော်တော်အမှတ်တံဆိပ် : ABB ။Siemens ရွေးချယ်မှု;
5. ထိန်းချုပ်မှုစနစ် plc ထိတွေ့မျက်နှာပြင်။သော့အောက်ခြေ;
6. ပုံသေအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် lifting အမျိုးအစား သို့မဟုတ် Pneumatic lifting;
7. လှော်တက်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးသည် ခြားနားချက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ယခင်- PLC နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ်စက်|အလှကုန် စက်ပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: နှစ်ထပ် homogenizer ဖုန်စုပ်စက် emulsifying ရောနှောစက်|အလှကုန် Emulsifier